Tsy misy mpiaro ny tantsaha - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
“Raha nandre ny kabarin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina nataony ny 8 janoary 2016 teo izahay tantsaha aty Antsahonjo dia velombolo tokoa” hoy Lemainty. “Mahakasika anay mivantana izany tany misoratra amin’ny colon izany ka misy Gasy nanamaintimolaly azy eo. Io tany volenay ankehitriny io dia efa tany amin’ny taona 1930 no nisoratra tamin’ny fianakaviana Ipton” hoy izy nanohy.
Ny volana marsa 2016 teo dia naka vola mitentina 160 000 Ar isam-pokontany ny ben’ny tanàna, Atoa Rajiabelina André dit Jabony, izay ben’ny tanànan’Ambodisakoana. Nalaina izany vola izany niakaran’izy sy solontena hafa ho any Antananarivo hikarakarana ny momba ny tany efa niasan’ny vahoaka eo amin’ny faritra iadidiany.
Rehefa tafaverina avy any Antananarivo ary ity ben’ny tanàna ity dia nilaza tamin’ny vahoaka fa : “Azo volena ny tany fivelomana hatrizay. Tsy azo kitikitihina ny tany fambolena landihazo”. Natoky ny vahoaka raha nandre izany. Samy niasa ny tany efa nataony hatramin’izay ireto tantsaha ireto. Samy manana ny famboleny moa ny tsirairay toy ny black-eyes, voatsiroaka, tsaramaso, katsaka.
Ny faramparan’ny volana mey anefa dia tonga ny sinoa naniraka olona nitondra trakitera roa "handratra" ny voly. Teo ambany fiarovan’ny zandary no nanaovana izany fanimbana ny voly izany. Tsy sahy nisakana ny tantsaha.
Toa izao no hita ao amin’ny tatitra nataon’ny lehiben’ny fari-piadidiana ny fampivoarana ambanivohitra : “Maty voatrongy sy potika tanteraka ary tsy misy ho raisina ny volin’ireto olona voatanisa anarana ireto (anarana 27 no voatanisa ao)”. Karazam-boly efatra no hita [black-eyes (velaran-tany 9,87 ha), voatsiroaka (7,54 ha), tsaramaso (3,87 ha), katsaka(10,50ha)]. Araka ny kajikajy fanombanana nataon’ity sampan-draharaham-panjakana ity dia mitontaly ho 19 119 600 Ar ny fandaniana natao nikarakarana ireo fambolena ireo ka isan’ny nikajiana izany ny vola lany nividianana ambioka, nitrongy, niava, nividy fanafody...). Ary raha namokatra ireo dia tombanana ho 39 722 500 Ariary ny vola tokony ho azon’ireo tantsaha ireo. Ny fitsirihana dia natao ny 2 jona teo.
Io no hita amin’ny fitsirihana natao teo amin’ny toerana iray. Ireo tantsaha kosa dia vonona hametraka fitoriana mifanaraka amin’io voalaza io ary misy koa fitoriana hafa ahitana fahasimbana hafa (voly kida, paraky, voanjo, voatabia, concombre, voatavo, voatango).
Toa izao no azo amintinana ny fitantaran’ireto tantsaha ireto ny momba ity ady tany ity.
Velaran-tany mahatratra 1570 ha no voakasik’izao resaka izao. “Efa tany amin’ny taona 1930 ny olona no niasa teto amin’ity faritra resahantsika ity” hoy Mompera Lemainty Sylvain. Misoratra amin’i Ipton ny tany hatramin’izay. Ny fomba fiasan’ity tompontany ity dia misy faritra iasany ary nanome ampahan-tany izy hipetrahan’ny olona sy hambolen’izy ireo manokana amin’izay voly tiany. Tombanana ho 60 ha io velaran-tany nonenana sy nambolena io. (Io ampahan-tany efa nahazatra ny olona io nisy voly noratrana io).
Dominique Ipton kosa no nandova ny tany. Tany amin’ny taona 1993 no nandalo fahasahiranana ny orinasan’ity mpandova ity. Dia nisy ny fotoana namidiny tamin’i Mamy ny tany. Ity farany indray kosa dia re siosio fa nifampiraharaha tamin’ny sinoa ao amin’ny orinasa Tianli Agri. Tsy fantatra mazava na famarotana ny tany io na fampanofana ny tany ihany (bail emphythéotique).
“Tsy nipetraka tamin’izao fotsiny izahay” hoy Ratsimbazafy Daniel. “Nanangana fikambanana antsoina hoe Vitsika izahay. Nangataka ny ampahan-tany izay niasanay sy nipetrahanay izahay” hoy izy. Efa talohan’ny taona 2000 izany. Ny taona 2011 dia mbola namerina nametraka fangatahana ity fikambanana ity. Naka topographe izy ireo ny volana janoary 2011.
Noho izany ezaka efa natao izany indrindra no nahavelombolo ireto tantsaha ireto raha nandre ny kabarin’ny Filoham-pirenena teny Iavoloha ny fiandohan’ny taona 2016 ity. Ho azy ireo dia mendrika hisitraka ny fahazoana ny tany izy ireo. Efa milevina ao amin’izany toerana izany ny razan’izy ireo, efa maherin’ny 80 taona nipetrahana teo ny fianakaviana sasany. Nahay nifampiraharaha tamin’ny colon. Saingy rehefa tonga ny fitondrana nentin’ny Malagasy vao tratry ny hafetsifetsena ny tantsaha. Fantatray fa nanana olana tamin’ny fanjakana ny taranak’i Ipton. Izany no antony nivarotany ny tany tamina Malagasy iray. Io indray no nifampiraharaha tamin’ny Sinoa. Izao tonga amin’ny fandratrana ny voly izao.
Ny tena olana ho an’ireo tantsaha ankehitriny dia tsy manana manam-pahefana ianteherana izy ireo. Ny volana mey teo dia niara-nidina teny an-toerana ny ben’ny tanàna, ny depiote ary ny lehiben’ny disitrika. Tonga nilaza izy ireo fa tsy afaka mijanona amin’ny tany ny tantsaha. Izy ireo noheverina hiaro ny vahoaka no tonga niaro ny vahiny. “Tsiahivinay fa ny depiote anie ka mpiasa tao amin’ny orinasan’i Mamy e” hoy ny tantsaha iray. “Manoloana izany tsy mahagaga raha ny tombontsoan’ny mpampiasany no arovany fa tsy ny anay vahoaka izay nifidy azy” hoy izy.
Miezaka mikaroka ny lalana hahazoan’izy ireo rariny ireto tantsaha. Nanatona ny teo anivon’ny fitsarana izy ireo. Nihaino ny toro-hevitra naroson’ny mpahay lalàna sy paikady.
Ny tena tadiavin’ireto tantsaha dia ny hitoetra eo amin’ny tany izay nomaintisin’izy ireo molaly ampolo taonany maro.
Tapaka ny hevitr’ireto tantsaha fa hitory izy ireo noho ny fanapotehana ny voly. Nitory an’ilay sinoa ao amin’ny orinasa Tianli sy ireo mpamily trakitera nampiasaina hanimbana ny voly ireo tantsaha maro. Dingana voalohany izany.
Ny dingana faharoa dia ny fanamafisana ny ezaka hahazoana ny tany, araka ny fampanantenana nataon’ny Filoham-pirenena. Mitodika manokana any amin’ny senatera ry zareo ankehitriny. Tsy manary toky izy ireo na dia efa hita aza fa tsy azo antenaina ireo manampahefana voatendry sy lanim-bahoaka. Marihina fa misy ny efa maniry haka tahaka ny zava-nitranga tany amin’ny tananan’i Mandritsara. Voatery ho izay tokoa ve ny famahana olana ?